Nei ndichifanira kutenga Huamachinery kambani?
Nekuti tiri kupfuura kungova fekitari. chinangwa chedu ndechokuti nechokwadi chokuti mutengi wose 100% kugutsikana kutenga dzavo uye zvitoro ruzivo. Kana usiri kugutsikana zvachose, ticharamba kuti vapindure zvinokunetsa pakarepo.
Ko kana paine dambudziko chinhu yangu?
Tine-gore rimwe garandi, Free yokutsiva zvikamu nokuda dambudziko unhu Tine uyewo kufara kugamuchira anodzoka zvinhu munyika itsva ezvinhu. garandi yedu chete chinoshanda nokuti yepakutanga anotenga of machine.
Mushure ukasarudza kutenga, isu kukutumirai proforma inivhoyisi wedu mubhengi ruzivo, kuunza PI ichi kubhengi, uye kumbira kuti T / T nokuda dhipoziti. For kuroorwa yakatarwa, muchina wako unogona kununurwa mukati 5 Mazuva pashure isu kuwana okubhengi, ticharamba kutumira chengarava uye kurwira kwamuri nemugungwa.
-Vanoenda nyaya zvakawanda mukugadzirisa mhosva, unogona kushandisa 100% muripo, tinogona kuronga zvinhu uye kutumira pasi mugove wako
-If uchiri havanzwisisi, ndapota regai hestitate neni kubvunza
Ndinogona rayirai 1 yakatarwa kuti mharidzo?
Yes.Sample chinogamuchirika, Unogona kuongorora unhu mharidzo.